Yiyiphi i-Good SAT Score kwi-College Admissions ngo-2018?
Funda ukuba zeziphi iikholeji ezikhethiweyo zijonga iziphumo ezifanelekileyo ze-SAT zokwamkelwa
Iyiphi amanqaku omhle weSAT kwi-SAT yokuhlola? Ngo-2017-18 wokungeniswa kunyaka, uviwo luqulethwe ngamacandelo amabini afunekayo: Ukufunda nokuBhala okusekelwe kwi-Mathematics. Kukho nakwiqhosha elikhethekileyo. Amanqaku avela kwicandelo ngalinye elifunekayo angabelana ukusuka kuma-200 ukuya kuma-800, ngoko ke amanqaku amanqaku angamaxabiso angenayo isincoko ngu-1600.
Amanqanaba eSAT izikolo
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokubala ukuba imilinganiselo "emyingene" yenzelwe i-SAT.
KwiCandelo loFundo oluSekeke-nziweyo, iBhodi yeKholeji iyaxela ukuba xa bonke abafundi beziklasi eziphakamileyo beza kuthatha uvavanyo, amanqaku aphakathi aya kuba ngaphantsi kwama-500. Kubafundi abafundiswe kwiikholeji abathatha i-SAT, loo myinge iya phezulu ukuya kuma-540 Inombolo yokugqibela mhlawumbi iyona nto inentsingiselo kuba isilinganiso phakathi kwabafundi okhuphisanayo kwiikholeji zangaphambili.
Kwinqanaba leMatriki loviwo, amanqaku aphakathi kwabo bonke abafundi besikolo esiphakamileyo afana kakhulu neCandelo loFundo lokuFunda nokuBhala-esingaphaya kwama-500. Kubafundi beekholeji abanokuthi bathathe i-SAT, eliphakathi kweMathematika Amanqaku angaphantsi kwama-530. Nantsi kwakhona le nombolo yokugqibela mhlawumbi iyona nto inentsingiselo kuba ufuna ukuthelekisa amanqaku akho nakwabanye abafundi beekholeji.
Qaphela ukuba uvavanyo luye lwaguquka kakhulu ngo- Matshi ka-2016 , kwaye amanqaku aphakathi aphezulu kakhulu namhlanje kunokuba ayekho ngaphambi ko-2016.
Yintoni ecingwa njenge-Good SAT Score?
Umyinge, nangona kunjalo, akukuxeleli ngokwenene uhlobo luni lwamanqaku oya kuwufuna kwiikholeji ezikhethiweyo kunye neeyunivesithi. Emva koko, wonke umfundi oya esikolweni ofana noStanford okanye u-Amherst uya kuba ngaphezu kwesilinganiso. Itheyibhile engezantsi inokukunika ingqiqo yamanqaku aqhelekileyo kubafundi abaye bavunyelwa kwiindidi ezahlukeneyo zeekholeji ezikhethiweyo kunye neeyunivesithi.
Gcina ukhumbule ukuba igrafu ibonisa ukuba u-50% ophakathi kwabafundi abaneematriki. I-25% yabafundi bafumana ngaphantsi kwenani elingaphantsi, kwaye i-25% yazuza phezulu kunani eliphezulu.
Ubonakala ngokusemgangathweni xa amanqaku akho akwiindawo eziphezulu kwiithebhile ezingezantsi. Abafundi kwi-25% engaphantsi kwamabala amanqaku baya kufuna ezinye izikhwepha ukwenza izicelo zabo zivelele. Kwakhona khumbula ukuba ekubeni kwi-25% ephezulu ayiqinisekisi ukungena. Iikholeji ezikhethiweyo kakhulu kunye neeyunivesiti zilahla abafundi abanama-SAT amanqaku afanelekileyo xa ezinye iinxalenye zesicelo zihluleka ukuphazamisa abantu abamkeleyo.
Ngokubanzi, umlinganiselo we-SAT ohlangeneyo we-1400 uza kukukhuphisana phantse nayiphi na iikholeji okanye iyunivesithi ezweni. Inkcazo yamanqaku "entle", nangona kunjalo, ixhomekeka ngokupheleleyo kwizikolo ozifaka zona. Kukho iikholeji zokuzivocavoca ezikhethiweyo apho izikolo ze-SAT zingabalulekanga, kwaye ezinye iiklasi kwezinye izikolo apho izikolo eziqhelekileyo (malunga no-1000 UkuFunda + iMathematika) ziza kulungelelanayo ukufumana ileta yokuwamkela.
Idatha ye-SAT yeeKholeji ezikhethiweyo kunye neeYunivesithi
Itheyibhile engezantsi izokunika ingqiqo yeendidi zamanqaku oza kuyidingela kukho uluhlu olubanzi lweekholeji zikawonke-wonke nakwii-eyunivesithi.
IiYunivesithi Ezizimeleyo - I-SAT Score Comparison (phakathi kwe-50%)
ICarnegie Mellon University 650 740 710 800 ubone igrafu
University of Columbia 690 780 690 790 ubone igrafu
University of Cornell 650 750 680 780 ubone igrafu
IDuke University 670 760 690 790 ubone igrafu
University of Emory 620 720 650 770 ubone igrafu
IYunivesithi yaseHarvard 700 800 700 800 ubone igrafu
KwiNyuvesi yaseNortheastern 660 740 680 770 ubone igrafu
University of Stanford 690 780 700 800 ubone igrafu
Yunivesithi yasePennsylvania 680 760 700 790 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseMzantsi California 620 730 650 770 ubone igrafu
Iikholeji zobuGcisa boLwazi - i-SAT Score Comparison (phakathi kwe-50%)
Amherst College 680 773 680 780 ubone igrafu
ECarleton College 660 750 660 770 ubone igrafu
ICginnell College 640 740 660 770 ubone igrafu
Ikholeji yaseLafayette 580 670 620 710 ubone igrafu
I-Oberlin College 640 740 620 710 ubone igrafu
Ikholeji yasePomona 670 760 690 770 ubone igrafu
KwiKholeji yaseSwthmore 670 760 670 770 ubone igrafu
Wellesley College 640 740 650 750 ubone igrafu
KwiKholeji yaseWhitman 600 720 600 700 ubone igrafu
College College 670 780 660 770 ubone igrafu
IiYunivesithi zikaRhulumente - I-SAT Score Comparison (phakathi kwe-50%)
KwiCyunion University 560 660 590 690 ubone igrafu
Yunivesithi yaseFlorida 580 670 590 680 ubone igrafu
Georgia Tech 630 730 680 770 ubone igrafu
IYunivesithi yaseOhio State 560 670 610 720 ubone igrafu
UC Berkeley 610 740 640 770 ubone igrafu
UCLA 580 710 600 760 ubone igrafu
IYunivesithi yase-Illinois e-Urbana Champaign 570 680 700 790 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseMichigan 630 730 660 770 ubone igrafu
Hill UNC Chapel 600 710 620 720 ubone igrafu
Yunivesithi yaseVirginia 620 720 630 740 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseWisconsin 560 660 630 750 ubone igrafu
Jonga umxholo we-ACT wale nqaku
Okunye malunga neeSAT izikolo
Iimvavanyo ze-SAT aziyona nto ebalulekileyo kwi-kholeji yesicelo ( irekodi yakho yezemfundo ), kodwa ngaphandle kweekholeji ezivivinywa-ezikhethiweyo, zinokudlala indima enkulu kwisigqibo sokwamkelwa kwesikolo. Amanqaku aphakathi awanako ukuwunqumla kwiikholeji ezikhethiweyo zelizwe nakwiiyunivesithi, kwaye ezinye iikoyunivesithi zikarhulumente zinamanani enqununu. Ukuba uhlawula ngaphantsi kweyona nto ifanelekileyo, awuyi kuvunywa.
Ukuba awuhlali ujabule ngomsebenzi wakho kwi-SAT, khumbula ukuba zonke iikholeji zivuyayo ukuba zamkele ii-ACT okanye izikolo ze-SAT kungakhathaliseki ukuba lihlala phi ilizwe. Ukuba UMTHETHO uphendlo lwakho olungcono, unokusoloko usebenzisa loo mvavanyo. Le nguqulo ye-ACT yale nqaku inokusinceda ekukhokele.
Icandelo lokubhala iSAT
Uya kufumana ukuba ezininzi izikolo zibika ukuluhlu nokufunda amanqaku, kodwa kungabikho amanqaku okubhala. Oku kungenxa yokuba inxalenye yokubhala yolu vavanyo ayizange ibanjwe ngokupheleleyo xa iqalisiwe ngo-2005, kwaye izikolo ezininzi zisayisebenzisi kwizigqibo zabo zokuvuma. Kwaye xa i- SAT ephinda iphinda iphindwe ngo-2016, icandelo lokubhala liyinxalenye yokuzikhethela. Kukho iikholeji ezifuna icandelo lokubhala, kodwa inani lezikolo elinalo mfuno liye lancipha ngokukhawuleza kwiminyaka yamuva.
Iinkcukacha ze-SAT ezingakumbi kwiikholeji ezikhethiweyo
Itheyibhile ngasentla nje kuphela isampuli yedatha evunyelweyo. Ukuba ukhangele idatha ye - SAT kuzo zonke izikolo ze-Ivy League , uya kubona ukuba zonke zifuna izikolo eziphezulu ngaphezu komyinge.
Idata ye-SAT yezinye iilunivesithi ezizimeleyo eziphezulu, iikholeji zobugcisa be-liberal phezulu , kunye neeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu zifana. Ngokuqhelekileyo, uya kufuna izibalo kunye nokufunda amanqaku angenani kwii-600 eziphakamileyo ukukhuphisana.
Uya kuphawula ukuba ibha yeeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu zihlala zincinane kunamanyunivesithi abucala. Ngokuqhelekileyo kulula ukufika kwi-UNC Chapel Hill okanye i-UCLA kunokuba ungene eStanford okanye eHarvard. Oku kuthetha, qaphela ukuba idatha yunivesithi yoluntu ingaba yinto ephosakeleyo. Ibha yokumkelwa kwabafaki-zicelo belizwe kunye nabangaphandle-basebenzi bangafani. Amazwe amaninzi afuna ukuba uninzi lwabafundi abavunyelweyo luvela kwi-state, kwaye kwezinye iimeko kukho oku kuthetha ukuba imilinganiselo yokumkelwa kwabafundi iphezulu kakhulu kubafakizicelo belizwe. Amanqaku adibeneyo angama-1200 angenelungelo kubafundi baseburhulumenteni, kodwa abafaki-sicelo belizwe bangadinga i-1400.
ISAT Data Test Test
Iikholeji ezininzi eziphakamileyo zelizwe zifuna abafakizicelo ukuba bathathe ubuncinane i-SAT yezifundo zovavanyo. Umyinge wamanqaku kwiimvavanyo zezifundo ziphezulu kakhulu kunokuba zihlolwe ngokubanzi, kuba iimvavanyo zezifundo zithathwa ngokukodwa ngabafundi abanamandla abafaka izicelo kwiikholeji eziphezulu. Kwizikolo ezininzi ezifuna iimvavanyo zezifundo, uya kuba noqhankqalazo kakhulu ukuba ezo ziphumo ziphakamileyo kwi-700. Unokufunda okubanzi ngokufunda malunga neenkcukacha zamanqaku kwizifundo ezahlukeneyo: i- Biology | Chemistry | Ukubhala | IMathematika | YeFizikiki .
Kutheni ukuba izikolo zakho ze-SAT ziphantsi?
I-SAT inokudala uxhalaba oluninzi lwabafundi abanamanani abo awahambisani neemfuno zabo zeekholeji.
Qaphela, nangona kunjalo, kukho iindlela ezininzi zokuhlawula izikolo eziphantsi kweSAT . Kukho iikholeji ezininzi ezihle kakhulu kubafundi abanamabanga amaninzi kunye namakhulu eenkoleji zokuzikhethela . Unokuphinda usebenze ukuphucula amanqaku akho ngeendlela ezivela ekuthengeni incwadi ye-SAT prep yokubhalisa kwi- Kaplan SAT .
Ingaba usebenza kanzima ukuphakamisa umlinganiselo wakho we-SAT, okanye ukhangele iikholeji ezingadingi amanqaku aphezulu, uya kufumana ukuba unamanani amaninzi ekholejini naliphi na izikolo zakho ze-SAT.
Ngaba kufuneka ndibuyise i-SAT?
Isakhiwo sokwakhiwa kwamagesi esithuthuthu
Ngaba UnokuCima izikolo zeSAT?
Inkcazo yeSemantic Inkcazo
I-Elvis Presley Iingqungquthela: 1956
Amagqabantshintshi: Inkcazo, UkuQulunqwa, kunye neNdidi
Indlela yokuguqula iMiles ukuya kwiikhilomitha - ukuya kwi-km Isibonelo Inkinga
Ukubulawa kweGwangju, ngo-1980
Abaninzi beebhanki kwiiMbali
Isiqendu Inkcazo kunye neMimiselo